Gole Siyaasiyiin magac ku leh Bulshadda oo ku midoobeen oo looga dhawaaqay magaalada Bosaso ee Puntland | WARARKA PUNTLAND
Home Maqaal Gole Siyaasiyiin magac ku leh Bulshadda oo ku midoobeen oo...
Madasha Siyaasiyiin reer puntland magac ku leh sameeyeen ayaa war-murtiyeed u soo jeedisay Dowladda Puntland. Siyaasiintan horay xilal kala duwan Maamuladii Puntland uga soo qabtay ayaa la qorsheynaa in dhawaan kulan weyne ballaaran ku qabtaan Bosaaso ee xarunta ganacsiga deegaanada Puntland. Madashan mideyn doonta Siyaasiyiin awood iyo kalsooni ku dhex leh beelaha Gobolka Bari iyo Puntland ayaa wada olole maamulka lagu toosinayo oo dhibaatooyinka colaadeed iyo dhaqaale ku boorinaya sidii wax looga qaban lahaa. Madashan kulmisay madax hore iyo ragga magaca ku leh deegaanka Puntland ayaa isku raacay shirar iyo wadatashiyo dheer oo maalmo uga socday Bosaaso in madashan oo loogu magac darray Golaha Siyaasiyiinta Puntland ee marka la soo gaabiyo ah (GSP ) isku afgartaan si loo horumariyo midnimada iyo wadajirka Puntland oo Qatar dhinacyo badan soo wajahday waqtigan iyo maamulka jira oo mid aad u liita lagu dhaliilay.
Shirar iyo kulamo gooni gooni isugu arkayeen maalmahan waxgaradka iyo siyaasiyiinta magaca ku leh gobolka Bari iyo guud ahaan Puntland ayey ku qiimeeyeen in xaalada deegaan, siyaasad, dhaqaale iyo kala qeybsanaanta ka dhalatay kala sad-roonaanta awooda Xukun ee beelaha kala tabanayaan Puntland ee ah kuwo siyaasad qabyalad ku dhisan oo ay abuurayaan lagu tilmaamay hogaanka sare Puntland talada u haya, taasoo ka dhalatay tafaraaruq iyo qalalaase xasilooni darro oo soo foodsaartay dhulka Puntland ee mudada dheer wadatashiga iyo midnimada ku wada noola nabad iyo wanaaga wadajirkaas.
Talooyin wax tar u ah Dowladnimada iyo jiritaanka reer Puntland oo kooxda abaabulaysa golahan u soo jeedinayaan Maamulka Talada Haya ee Puntland.
Waxaa lagama maarmaan ah in aanu is xasuusino waxa inoo qabsoomay mudadii 18-ka sanno jirtay Puntland iyo waxa inaga dhiman ee aan weli la gaarin lana hiigsanayo. Dooda dadweynaha Puntland iyo aragtidada kala duwan ee in la is-dhaafsado u baahan, kuwaas oo dhamaan loo baahan yahay in ay ahaadan kuwo nuxur iyo isla xisaabtan wadareed la helo oo leh sharci iyo qaanuun sal u noqon kara wanaaga Dowladdnimadeena haddii dhego maqla la helo.
Waxaan isleenahay waa loo baahan yahay in aynu ku biirino Talooyinka Maamulka Talada haya oo waxaan is-leenahay waa muhiim in la tixgeliyo qodobadan hoos aan ku xusan,kuwaas oo saldhig u noqon kara midnimadooda iyo wadajirka aayo-ka talinta Shacab-weynaha Reer Puntland . Waxayna tahay Aragtida Golaha Siyaasiyiinta Puntland ee (GSP) sidatan :-
In Dib-u-eegis lagu sameeyo Dastuurka Puntland, iyadoo talo ka bixinaya Siyaasiyiinta Magaca ku leh Puntland iyo qeybaha Bulshadda ee Gobolada iyo dhamaan deegaanada Puntland ku dhaqan.
In Guddiga Doorashadda la magacaabay kalsooni badan Bulshadda Puntland ku qabto Dowladda Puntland ay siiso awoodo madaxbanaan oo dhex dhexaadnimo, kana hufan qabyaalad iyo kuwo dowladda talada haysa ku milma. waa in Guddigu ku shaqeeya masiirka hayaanka fog ee Maamul wanaaga iyo Cadaaladda u dhexeynta dhamaan Dhinacyada Siyaasadda Puntland iyo inuu ka dhabeeyo dardargelinta hanaanka xisbiyada badan sida ugu dhaqsiyaha badan, annagoo noo muuqato in xagal daacin iyo waqtigii loogu talagalay in hanaanka xisbiyada la hirgeliyo la luminayo.
Xeerarka Doorasho ee horay loo meel-mariyey in dib u eegis lagu sameeyo si looga saaro waxyaabaha aan la saanqaadi karin doorasho caddaalad iyo Sinaan saldhig looga dhigayo oo si xalaal ah ku dhisan, si bulshada puntland ugu tartamaan Habka Xisbiyada iyo Dumuqraadiyadda Puntland ku dhisan oo qabyalada looga gudbo.
si loo helo hay’ad madaxbanaan oo Garsoor awood u leh kala saarida muranada iyo Khilaafka Siyaasadeed.Si fursad waqti loogu helo waa in si deg deg ah loo dhisaa Guddiga Maxkamadda Dastuuriga ah ee Madaxabanaan,
Waa in la abuura jawi keeni kara Kalsooni Dowladda iyo Shacabka Puntland, lana yareeyo colaadaha Beelaha khilaafka dhulka iyo deegaanka, eexda, sadbursiga iyo kala fadli yeelida shacabka Puntland ee u sinaan la,aanta fursadaha shaqo, waxbarasho iyo dhaqaale.
Waa in Dadka laga tirada badan yahay iyo Haweenka Dastuurka lagu cadeeyo Awood qeybsiga Baarlamaanka Puntland xaqa ay ku leeyihiin, si ay u helaan kalsooni siyaasad aan takoor ku dhisneyn, si ay u helaan hanaan Maamul biseyl oo leh karti iyo hufnaan uu wax ugu qabanayo inta nugul bulshada Puntland sida naafadda, waayeelka, agoomaha, dadka dimirka la iyo kuwa aan iitaalka u lehyn shaqo ee u baahan xaquuq daryeel .
Waa In Hogaanka dhaqanka Beelaha Puntland noqdaan kuwo isku xiran oo talo wadaag ah, kana fogadaan tafaraaruuqa, kala qeybsanaanta iyo kala taga iska ilaaliyaan oo ka fogadaan inay faragelin Siyaasadeed iyo ku Milan isku dhaf arrimaha Dhaqanka iyo Siyaasadda ku lug lahaansho badan hogaamintooda dhaqan soo dhexgelin, isla markaana Hogaanka Dhaqanka Puntland loo sameeyaa xaduud dhaqan oo ku dhisan kuwo tiradooda xadidan oo aanay noqon kuwo tiro dhaaf ah oo iska abuurma goor walba, iyadoo dano Siyaasadeed loo abaabulayo sameynta Hogaan dhaqan oo cusub, waana in Taladda dhaqanka loo daayaa kuwii soojireenka ahaa ee Beel walba lagu yaqaanay, lagana feejignaado kuwa cusub ee mar walba hanaanka Siyaasadeed loo abuuro, taaso kala dhantaali karta Hogaanka Dhaqanka Beelaha iyo qeybsanaan Beelaha dhexdooda ka abuurto..
In la xoojiyo Sareeynta Sharciga iyo Dowladnimada Wanaagsan ee ku dhisan Caddaalad iyo Sinaan, hufnaan iyo dhaqan Maamul wanaag saldhig looga dhigay oo isla xisaabtan cad uu jiro, si loo tirtiro musqmaasuqa iyo lunsashada hantida Dowladda iyo Canshuurta Hay’adaha ladan ee shirkadaha waa weyn leexsadaan looga gun gaadho.
In wax laga qabto Tabashooyinka Beelaha aan awooda siyaasadda ku laheyn Dowladda Federaalka Soomaaliya . Sida Golaha Sare iyo Aqalka Hoose Beelaha aan ku laheyn xubno metela u helaan.
In Dowladda Puntland sees adag oo habka isla xisaabtanka iyo la dagaalanka Musuqmaasuqa la xoojiyo si loo gaaro Himilada Dowladnimo.
In la xoojiyo adkaynta Midnimda iyo wadajirka Bulshoweynta Reer Puntland, lana abuuro Kalsoonida Shacabka iyo isku xirnaanta Dowladda, iyadoo talooyinka lala wadaagayo ee aan la maroorsan Xukunka iyo Maamulka la wada leeyahay.
Waxan Talo ku soo jeedinaynaa in loo gudbo Habka Dimuqraadiyada iyo ka wada qeybgalka Masiirka Siyaasadeed ee Puntalnd oo qof walba doorto wakiilada Dowladda u metelaya Shacabka.
Waxaa kaloo muhiim ah in Xisbiyadda Siyaasadeed ee la furanayo aan lagu soo koobin sadex Xisbi oo kaliya, waa in ilaa Shan Xisbi laga dhigo kuwa rasmiga noqonaya meesha hadda ay ka yihiin xeerka sida lagu qoray Sadex Xisbi Siyaasadeed.
Dhamaan qodobadaas waxaan is-leenahay waa kuwo muhiim ah oo loo baahan yahay in aan ku xoojinayno uguna soo jeedinayno Talo Dowladda iyo Maamulka Puntland ee hadda Talada haya.
Gaba gabadii Waxan ugu baaqeynaa dhamaan Hay’adaha Dowladda ee Puntland in laga wada fekero masiirka iyo mustqabalka midnimada iyo wadajirka Puntland, iyagoo la horseedayo hanaan aan ku dhisneyn qabyaalad, eex iyo qeybsanan, si loo beegsado biseyl Maamul wanaag iyo in uu noqdo mid sareeya oo qofkasta u siman yahay, kaasoo ku dhisan qaanuun saldhig adag ah oo ay dhigeenkuna wada heshiiyeen reer Puntland.
Hay’adaha Hanti-dhowrka waxaa lagamamarmaan ah oo looga baahan yahay in ay si adag oo madaxbanaan ugu shaqeeyaan dalkasi loola dagaalamo musqmaasuqa iyo lunsashada hantida la wadaago ee dadweyanaha, taasoo magaca dowladeed shakhsiyaad ugu tagrifalaan sida hanta ay gaar u leeyihiin iyagoo aan wax tallaabo laga qaadin boobka hantida dowladda. Hanti dhowrka guud waxaa looga baahan yahay si cad oo muuqata inuu saxaafadda u soo bandhigo shakhsiyaadka awooda dowladda ku booba hantida guud ee dadweynaha Puntland, si ay ula xisaabtamaan hay’adaha garsoorka Puntaland oo ah kuwo qudhooda si madaxbanaan oo awood sharci sareyn ku dhisan ugu ciqaabo cidda hantida guud lagu helo inuu dhacay oo ku tagrifal awoodeed sameeyey.
“War jiraaba Cakaaru iman”
Mahad Eeba Ayaa leh
Golaha Siyaasiyiinta Puntland
This post has already been read 71724
Previous articleXOG:- SUURO-GALNIMADA IN PUNTLAND LAGU CELIYO KURAAS TA AQALKA HOOSE
Next articleMadaxweynaha Puntland C/weli gaas wuxuu dagaal kula jira cadaawadeed Gobolka Bari.